के हाे गोल्डेन मिल्क ? धेरै अध्ययनले जोर्नीको दुखाइ र सुन्निने समस्याका लागि बेसार फाइदाजनक भएको देखाएको छ Share
सेक्स डलको खोजीमा ५० कटेका महिला महिलाले महिला–यौन खेलौना बढी प्रयोग गर्न थालेपछि तीनको मूल्य पनि बढेको छ । आफूले भनेजस्तो यौन खेलौनाका लागि जति पनि रकम तिर्न तयार महिलाको ठूलो संख्या भएको द डल हाउसका बास बताउँछन् । Share
शिलापत्र समाचार प्रभाव : ४० वर्षपछि पूरा भयो रामबहादुरको घर जाने रहर ‘४० वर्षपछि आफन्तसँग कुरा भएको छ । उहाँहरूले मलाई गाउँ बोलाउनुभएको छ । धेरै पछि घर जाँदैछु । कतिले त चिन्दैनन् पनि होला,’ टेलिफोनमा कुरा गरेपछि उनले खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘म घरमा आउँदै छु Share
वाह ! वागमती (फोटो कथा) मुख्यसचिवदेखि पियनसम्म आइजीदेखि जवानसम्म सफाइमा खटे । नागरिक स्वतःस्फूर्त वागमती सफाइ अभियानमा लागे । अहिले हेर्नुस् त आहा वागमती । सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म किनारै किरान हिड्नुहोस, तपाईंको मुखवाट पटक पटक निस्कने छ वाह ! वागमती Share
आफैंलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ ? जब हामी आफैंलाई प्रेम गर्न थाल्छौं, जीवनले सही र सन्तुलित बाटो समात्छ Share
सुन्दरताका लागि आफ्नै पिसाब पिउँछन् यी चर्चित स्टारहरू राम्रो स्वास्थ्यका लागि आफ्नै पिसाब पिउन मन पराउँछन् । सुन्दै अचम्म लाग्छ । कोही व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि आफ्नै पिसाब सेवन कसरी गर्नसक्छ ? यस्ता छन् दुनियाँका चर्चित स्टारहरू जो सुन्दर र स्वस्थ बन्न आफ्नै पिसाब पिउँछन् । Share
जाडोमा छाला फुस्रो हुनबाट जाेगिने उपाय साबुन जति बास्नादार हुन्छ, उति नै केमिकल मिसाइएको छ भन्ने जान्दा हुन्छ । केमिकलयुक्त साबुनले छाला रुखो बनाउँछ । साबुन प्रयोग नै गर्ने भए घ्युकुमारी र नीमबाट बनेको रोज्नुहोला Share
कफी दिनकाे कति पिउने ? एक दिनमा चार कपभन्दा बढी कफी नपिउनुस् Share
अमेरिकी राजदूत लस्सी पसलमा भेटिएपछि ... पसलमा लस्सी खाइरहेका बेरीतिरै सबैको ध्यान गएकाे थियो । प्रदेश २ सरकार बनेपछि दर्जनभन्दा बढी देशका राजदूत प्रहरीको स्कर्टिङसहित जनकपुर पुगेका छन् । तर, उनको तडकभडक केही थिएन। पसलमा आउने सबै सर्वसाधारणसँग हात मिलाउँदै लस्सी खान आग्रह गरिरहेका थिए उनी । Share
सुप किन खाने ? -हात तथा खुट्टा झमझमाएमा वा हात खुट्टा पोल्ने समस्या भएमा पनि सोप र धनियाँलाई बराबर मात्रामा मिलाएर त्यसको मिश्रण बनाएर मिश्री पानीसित खानाले पनि हातखुट्टा पोल्न समस्या विस्तारै कम भएर जान्छ Share
जाडोमा ल्वाङ चियाः यस्ता छन् फाइदा गिँजामा समस्या छ भने ल्वाङ हालेको चिया पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । ल्वाङ हालेको चिया नियमित सेवन गर्नाले गिँजा र दाँतसँग सम्बन्धित समस्यामा राहत मिल्छ । यसले मुखमा भएको ब्याक्टेरिया पनि नष्ट गर्छ Share
तुलसीको पात दूधमा उमालेर पिउँदाका फाइदा तुलसीको पात दूधमा उमालेर पिउने हो भने धेरै किसिमको रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ Share
याैन जीवन कसरी बन्छ सुखमय ? समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो चाहे त्यो व्यवसायमा होस् या स्वास्थ्यकै विषयमा किन नहोस् Share
भान्छामै छन् दुखाइ कम गर्ने उपाय हाम्रो भान्छामा पाइने यी खानेकुराले हाम्रो शरीरको विभिन्न दुखाइ कम गर्छ Share
कागतीको यस्तो बेफाइदा Share
शान्त दोरम्बामा स्वादिष्ट आलुको ढिँडो ‘दोरम्बा हत्याकाण्ड’ बल्झिरहने युद्धको एउटा घाउ बन्यो । हत्याकाण्डपछि धेरै दोरम्बावासी विस्थापित भए । तर, अहिले दोरम्बाको रूप फेरिएको छ । परिचय बदलिएको छ । Share
जंगबहादुरका मामा माथवरसिंहको महाअष्टमी प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापा एक हातले बाह्र धार्नीको बोको मार हानेर चटक्कै छिनाउथे भने अर्को हातले मुठीभरी राखेको हाडे ओखर मरक्कै पार्थे । इतिहासकारले उक्त प्रहारको नाम ‘माथवरसिंहको मार’ दिएका छन् Share
दसैंमा स्वस्थ रहने उपायः जिब्रोलाई नियन्त्रण ! दसैं खुशी र उमंगको चाड । दसैंमा रमाइलो गर्ने, खाने पिउने हो । यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, उत्साहमा हामीले स्वास्थ्यमा त्यति ख्याल राख्दैनौं । Share
बजारमा नेपालीका ज्योति 'सन्दुक रुइत' काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहमा २१ वर्षसम्म पूर्ण दृष्टिविहीन भएर डा. रुइतले गरेको शल्यक्रियाबाट दृष्टि पाएका सल्यानका शिक्षक तोपबहादुर शर्माले पुस्तक लोकार्पण गरे Share